isticmaalka badan ee isticmaalka laser nd yag tattoo saarista + 808 diode laser timaha soo saarista
Sidee ayuu AlexMED Plus uga shaqeeyaa saarista timaha? AlexMED Plus wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka isku-dhafka ah ee 3 dhererka dhererka ugu waxtarka badan ee timo-goynta, mid kasta oo bartilmaameedsanaya qaabab kala duwan oo ku dhex yaal timaha. 3da bartilmaameed ee ugu muhiimsan ee jirka ayaa waxaa ka mid ah Bulge, Bulb iyo Papilla. ALEX 755NM WAVELENGTH Dhererka dhererka Alexandrite wuxuu siiyaa awood badan oo nuugista melanin chromophore, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon noocyada ugu ballaaran ee timaha iyo midabka- gaar ahaan midab khafiifka ah iyo khafiifka ah ha ...
Xirfadleyda Xirfadlaha ah ee 'ND Yag Laser' mashiinka ka saarista tattoo-gacmeedka Picosure 755nm ee loogu talagalay Salon Beauty
Sidee buu pico laser u shaqeeyaa? PicoSecond Laser wuxuu adeegsadaa garaaca wadnaha oo aad u gaaban (hal tirilyan oo ilbiriqsi ah dhererkiisa) si uu ugu dhufto melanin cadaadis weyn, melaninku wuxuu u jajabayaa waxyaabo yaryar oo u eg boodh. Maaddaama qurubyadu aad u yar yihiin, si fudud ayey u nuugaan oo jirku u tirtiraa. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa nadiifinta wanaagsan ee melanin iyo daaweyn ka yar guud ahaan. PicoSecond Laser waa daaweyn dhakhso ah oo fudud oo aan qalliin ahayn, daaweynta maqaarka ee aan-faafa lahayn ee jirka oo ay ku jiraan laabta ama decol ...
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Laser Epilator Ipl, Module Laser 808, Ipl Xenon Flash Siraaj, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Diode Timo Goynta Laser Guriga, 3 Gudaha 1 Ipl, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha